Yiba kwamaJuda Omkhulu Lokwahlulela sobukhosi sikaNkulunkulu uMninimandla onke | Lost Sheep for Christ
Yiba kwamaJuda Omkhulu Lokwahlulela sobukhosi sikaNkulunkulu uMninimandla onke
Abafowethu nodadewethu basenze sihlangane ndawonye ukuze sikhulume ngaleli qiniso elingunaphakade. Ngesinye isikhathi ekuphileni kwethu, sizofa. Asazi isikhathi noma ihora lokuphela kwethu, kodwa njengoba uMbhishobhi Augustine waseHippo ethi, ” Okunye okuhle nokubi, akuqiniseki; ukufa kuphela uma kukhona “ Ukulungiselela Ukufa, P.55 Kungani lesi sihloko singakhulumi ngalokhu? Thina njengabantu abafuni ukucabanga ngakho. Ngezinye izikhathi senza njengokungathi, sizophila phakade emhlabeni futhi singafi. Ngikhumbula lapho ngidabula e-Dubai, ngabuza umfana ngesikhathi sokuzalwa kwakhe, wangitshela ukuthi “asigubhi usuku lwethu lokuzalwa njengabasentshonalanga, sikholelwa (Islam) ukuthi sinosuku oluzalwa ngalo nosuku lokuphela (ukufa). “Angizange ngithole isitatimende sakhe ngaleso sikhathi, kodwa njengoba ngicabanga ngakho manje, lokho engitshela khona, ukuthi kufanele siphile impilo enhle manje. Akunandaba ukuthi ukwenza imali engakanani, noma uhluphekile kangakanani. Akukhathaleki ukuthi kunkulu kangakanani noma mncane wendlu onayo. Akunandaba ukuthi ungumnikazi wendawo noma cha. UNkulunkulu akhathazeki ngalokho. Lokho akhathazekile yilokho, wenzeni ngesikhathi kanye nezipho ozinikezwe zona? Ingane ingadlala ngebhayisikili yakhe iphinde iwele emgwaqeni phambi komuzi wayo, imoto ingavela ngaphandle futhi imbulale, ” Asazi usuku noma ihora “. Indoda ingaya ukuzingela entabeni, ingabi nokuma nokuzingela kanzima. Isimo sezulu siyashintsha futhi ufa nge-hypothermia. “Asazi usuku noma ihora”. Umphefumulo omusha ungashada, ube nomshado omuhle. Uchitha ubusuku kanye nomkakhe. Wafa ebuthongweni bakhe. “Asazi usuku noma ihora”.
USt. Bernard uthi, ” ukufa kungasusa impilo ngaso sonke isikhathi nakuzo zonke izindawo, kufanele, uma sifisa ukufa kahle futhi sisindise imiphefumulo yethu, siphile njalo silindele ukufa “ Ukulungiselela Ukufa, P.63 Ngokufa ngaphambi kwamehlo ethu njalo, senza izinqumo ezingcono. Sithatha ngempela ukuthatha isikhathi sethu ukukhetha izinto ezilungile phezu kokungalungile. Ngenze okuhle namuhla? Ngabe ngibonise ukubekezela nokuhlakanipha kumakhelwane wami? Nginike isikhathi sami ekukhonzeni abanye? Le Ntshumayelo akuyona yamaKristu, amaJuda noma amaSulumane kuphela, kungenxa yonke imiphefumulo eyodwa eyadalwa nguNkulunkulu uMninimandla onke. Ngisho noma ungazi uNkulunkulu, imithetho yakhe ibhaliwe ezinhliziyweni zakho. Unembeza wakho usevele wazi ukuthi yini okuhle nokubi. ICatechism yeSonto LamaKatolika (CCC 1022) kusho “Umuntu ngamunye uthola impindiselo yakhe yaphakade emphefumulweni wakhe ongapheli ngesikhathi esifanayo sokufa kwakhe, esahlulelweni esithile esibhekisela ukuphila kwakhe kuKristu: ukungena ekubusisweni kwezulu-ngokuhlanzwa noma ngokushesha, – noma okusheshayo naphakade ukulahlwa. “ Njengoba singazi ukuthi isikhathi sethu sisiphi isikhathi. Ukuhlakanipha 11:20 “Ngaphandle kwalokhu, amadoda angawa ngomoya owodwa lapho ephishekela ubulungiswa futhi ehlakazekile ngamandla omzimba wakho. Kodwa uhlele zonke izinto ngokulinganisa nokulinganisa nesisindo “ St. Ambrose, St Augustine, uSyril Cyril wase-Aleksandriya, uSt. John Chrysostom, uSt Basil, uSt. Jerome, uSt. Alphonsus Liguori, bonke laba obaba besonto lokuqala, ngomusa kaMoya oNgcwele bavezwe ukuthi wonke umuntu unabantu abaningi izipho ezinikezwe zona. Ngemuva kwazo zonke lezi zinsuku seziphelile, khona-ke uNkulunkulu uzodinga ubulungiswa ngenxa yeziphambeko zakho eziqhubekayo. Kube khona ubufakazi bokuthi umntwana ofike eminyakeni yobucabango, wakhuluma ukuhlambalaza uNkulunkulu futhi wafa futhi waya esihogweni. Sekube ubufakazi umuntu izono zabo kuqala obhubhayo, wafa ngaso leso sikhathi, ajeziswe ingunaphakade. Ngakho kungani ungathatha ithuba bese uthi kuwe, “Ngizoshintsha izindlela zami kusasa”. Lesi silingo sivela kuDeveli, sikutshela ukuthi ungakhathazeka ngakho kusasa. Kodwa umkhuze futhi uthi, “Ngabe umuntu angangithembisa ukuthi kusasa kodwa uNkulunkulu?” Ngubani ngaphandle kukaNkulunkulu yedwa owaziyo ukuthi ngingazithola kanjani ithuba lokuphenduka? Ungazi kanjani ukuthi indebe yakho igcwele? Uyazi kanjani ukuthi uNkulunkulu uzokuvumela ukuba uphile kuze kube neminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye noma uma ungayenza kuze kube amashumi amabili?
Jobe 14: 5 “Njengoba izinsuku zakhe zenziwe, nenani lezinyanga zakhe linani, futhi umise imingcele yakhe engayikuyidlula” Nsuku zonke ukuthi uthatha umoya, ususondele kulokho kuphelela.Ungavumeli insindiso yakho kuze kube kusasa. Uma wazi ukuthi awulungile kuNkulunkulu, khona-ke phenduka ebubini bakho bese ubuyela kuNkulunkulu. Buyela emazwini akhe angcwele futhi ufunde incwadi yakhe engcwele kakhulu, iBhayibheli. USt. Augustine uthi Ukulungiselela Ukufa P.66 “Uma ngabe kufanele uyilahle ngesikhathi esithile, kungani ungayishiyi ngalesi sikhathi? Mhlawumbe ulindekuze kube sekufeni ukufa? Kodwa, ngenxa yezoni ezinzima, ihora lokufa yileso sikhathi, hhayi sokuxolelwa, kodwa impindiselo. Ngesikhathi sokuphindisela, uyakukubhubhisa. “. Uyongena ngokushesha esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu ngesahlulelo sakho. Ngokusho kwezazi eziningi zemfundiso yenkolo, izincwadi ezimbili zizokhishwa. IVangeli ne-Unembeza we-Sinner. IVangeli uzobe ukufunda mayelana nendlela okufanele baye baphila impilo yakho kanye nezinye, kulokho ngempela wenza empilweni. UDeveli uzokuba khona ukuletha zonke izono zakho phambi kukaNkulunkulu futhi amtshele usuku nosuku owenze izono zakho. I-Angel Guardian yakho izofakaza phambi kukaNkulunkulu kuwo wonke amathuba owanikezwa wona. Zonke izibusiso uNkulunkulu akunike zona ukuphenduka futhi kude nezono zakho. Unembeza wakho uzokhuluma phambi kukaNkulunkulu futhi utshele ukuthi kwenzekani kuwe. Kuye ngesimo sokufa kwakho. UNkulunkulu uzothatha isinqumo sokuthi uzoya ezulwini, esihogweni noma ePuratory. Kuyinto enyantisayo, ukuba ube ezandleni zikaNkulunkulu ngesahlulelo sakho sokugcina, uma ungakulungele.
Ake sivale ngalokhu. Ngoba nami ngifakwe endabeni yakhe. Masijoyine kulo mthandazo. UNkulunkulu uMninimandla onke noNkulunkulu owaziyo, unelungelo lokungilahla izono zami zokuqala.Ngomzuzu engiwenzile wona, ngazifaka isahlulelo futhi ngifanele isihogo. Ngiyavuma ukuthi abaningi baye bafa ngaphambi kwami, noma ngokwenza izono zabo zokuqala zokufa noma eziyikhulu. Unginike amasha amaningi namathuba okuguqula futhi angisenalo. Ngiyakuncenga, O Nkulunkulu onesihe, ungangivumeli ukuba ngiphinde ngikukhubekise futhi ungagcini indebe yobubi bami, ngilethe ulaka lwakho oluphelele nolulungeleyo kimi. Ngiyathandaza, ngeMusa kaJesu Kristu, owafika ezweni ukuzobuyisana nathi noNkulunkulu, ukugeza izono zami ngegazi lakhe eliyigugu. Ukuze ngiphule ubunzima benhliziyo yami futhi ungikhulule ekugqibeleni kokusinda kwami. Phula iminyango kaDeveli eyongibamba ezonweni zami. Ngivumele ngigijimele eSontweni LamaMama Ongcwele futhi ngiphenduke ebugebengu bami, ngithole ukungaboni ngaso sonke isikhathi futhi ngiphambuke ebubini. Ukucela ukuncenga kwengelosi yami yokuqapha, abangcwele ezulwini kanye noMbusi Othembekile uMariya, ngoGrace of UKUQALA OKUPHELELE futhi i UKUHLELA KOKUPHILA . Ngoba ngifanele ngihlupheke lapha emhlabeni, bese ngibhekana nokujeziswa okuPhakade, ngahlukana nawe. Ngenxa yalokhu sithandazela lesi Sihawu Somusa sikaNkulunkulu, Amen!
Phenduka futhi ufulathele ezonweni zakho, ngaphambi kokuba abafowethu bephuzile kakhulu,
← Kuwa mbele ya Hukumu Kuu Kiti cha Enzi cha Mwenyezi Mungu
Meditasi 03-10-2019 →